Ajụjụ - Focus Technology Co., Ltd.
Car saa igwe
kacha mma akara & anwụrụ
Gịnị bụ na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke miniature electric diaphragm mgbapụta?
The miniature electric diaphragm mgbapụta a kwadoro site na a Micro DC moto (n'ozuzu 5V, 12V, 24V moto), nke mere esịtidem n'ibu eccentric ngwaọrụ ịrụ eccentric ngagharị, na eccentric ngagharị mere esịtidem diaphragm ka n'anya. Ya mere, na ikuku na mgbapụta ulo nke ofu olu abịakọrọ (na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri a na-emechi mgbe Compressor na meghere, iyuzucha mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na meghere na-etolite a nta mma mgbali), na ndọtị (iyuzucha n'ọdụ ụgbọ mmiri a na-emechi mgbe Compressor bụ mechiri emechi, na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na meghere na-etolite a na-adịghị mma mgbali), na pumping na-rụrụ. A mgbali dị iche na-eme n'etiti ikuku mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na n'èzí ikuku nsogbu. N'okpuru ihe nke mgbali dị iche, ndị gas na-pressurized (ṅụrụ) n'ime mgbapụta ulo na atara iyuzucha n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti a nloghachi mgbapụta na a mgbali mgba ọkụ mgbapụta?
Reflux ụdị: The mgbapụta nwere ya mgbali enyemaka ejupụta circuit ngwaọrụ. Mgbe mmiri tinyekwa na-emechi ma kaa akara, mmiri mmiri na mmiri mgbapụta amalite na-akpaghị aka decompress ma laghachi, nrụgide n'ime mmiri anwụrụ agaghị amụba, na mmiri anwụrụ ga adọkaghị.
Pressure mgba ọkụ ụdị: Mgbe mbịne na electric mgba ọkụ, gbanye mmiri egbe mgba ọkụ, na-amalite na-arụ ọrụ, gbanyụọ mmiri egbe mgba ọkụ, na mmiri mgbapụta na-akpaghị aka ebipụ na-akwụsị na-arụ ọrụ; mgbe ahụ-atụgharị na mmiri egbe mgba ọkụ, na mmiri mgbapụta na-akpaghị aka na-amalite na-arụ ọrụ. Nrụgide nke mgbapụta na-akpaghị aka-eji nsogbu dị ka size nke nozulu.
N'ozuzu, e nwere ọtụtụ ụdị nke sprayers, nsogbu switches na-adịkarị eji na ụgbọ ala saa igwe. Lee anya na gị onwe gị na ọnọdụ na-ahọrọ nri mgbapụta.
Gịnị bụ akporo nke ojiji nke DC nfuli?
1, The mmepụta nke electric sprayers eji na ugbo.
2, Iji dozie ojiji nke RV, yachts, wdg na ojiji nke nri, ịsa, na-asa ahụ, ụlọ mposi, saa mmiri.
3, Ugbo ala, n'ala ndị ọzọ ihicha ngwá
4, Food, onunu nhazi na nhazi akụrụngwa.
5, The ezinụlọ mmiri.
6, The anyanwụ ụlọ ọrụ.
7, mmiri dị ọcha ụlọ ọrụ.
8, Ndị ọzọ na ngwá na usoro na-achọ mmiri mmiri nyefe, ọgwụ na ọbụna metering
Gịnị bụ nkịtị mmejọ na nchọpụta nsogbu ụzọ knapsack electric sprayers?
Ezughi oke ịgba mgbali, ogbenye atomization: Ọ bụrụ na mmiri na obi ụtọ valvụ ebuliwo site unyi, n'ọnu-miri valvụ nwere ike wepụrụ na unyi nwere ike wepụrụ na a ákwà; ma ọ bụrụ na iko mebiri emebi, ndị ọhụrụ cup nwere ike dochie anya; ma ọ bụrụ na nkwonkwo na-adịghị arụnyere akara mgbanaka, ma ọ bụ na-eri eri n'ihi mmebi nke akara mgbanaka, nwere ike arụnyere ma ọ bụ dochie.
Spraying adịghị na-etolite foogu: Ọ bụrụ na-achọ oghere nke nozulu ahụ egbochi site unyi, na-achọ oghere nwere ike dredged; ma ọ bụrụ na ndị nhicha nozulu oghere nwere ike disassembled n'ihi na nozulu oghere mkpọchi, na ike ihe orifice dị ka waya ma ọ bụ ọla kọpa agịga ike ga-eji gbochie oghere si ịgbasa. Iji mee ka ịgba quality njọ; ma ọ bụrụ na nyo na casing na-clogged ma ọ bụ na obi ụtọ na-kwụsịtụrụ site na mmiri valvụ, nyo kwesịrị kpochara na unyi na na obi ụtọ a ga-kpochara.
The mgba ọkụ leaks ma ọ bụ adịghị akpali: Ọ bụrụ na mgba ọkụ okpu na-adịghị tightened, ikesiike mgba ọkụ okpu; ma ọ bụrụ na washer na mgba ọkụ isi wears, dochie washer; mgba ọkụ adịghị akpali, n'ihi na ọ na-etinye n'ihi na a ogologo oge, ma ọ bụ na-eji maka kwa ogologo, mgba ọkụ The isi na-agbasoghị site etch nke gị n'ụlọnga, na akụkụ a ga-ewepụ n'ihi na nhicha na kerosin ma ọ bụ mmanụ dizel mmanụ; ma ọ bụrụ na ọ bụ ike iji wepu, na ọ ga-mikpuru kerosin maka oge nke oge, na mgbe ahụ wepụrụ na wepụrụ, na ike ihe ike ga-eji.
Mmiri leakage na onye ọ bụla na nkwonkwo: Ọ bụrụ na nkwonkwo bụ rụrụ, ikesiike aku; ma ọ bụrụ na gasket na-adịghị esisịt ma ọ bụ mebiri emebi, na gasket ga esisịt ma ọ bụ na gasket dochie; ma ọ bụrụ na gasket na-obi tara mmiri site shrinkage, ọ nwere ike ịrọ arọ na anụmanụ mmanụ n'ihu were.
Olee na-elele ihicha mmetụta nke anụ ụlọ elu nsogbu Cleaner?
Mgbe iji a elu-mgbali Cleaner n'ihi na elu-mgbali mmiri ugboelu ihicha, anyị mesịrị chọrọ ịmata otú na ihicha mmetụta na-arụ ọrụ. Nke a na-achọ nnyocha, mgbe ahụ, otú elele ihicha mmetụta nke elu nsogbu Cleaner ụlọmkposhi? E nwere ọtụtụ ụzọ, nke bụ:
(1) Random nlele usoro
Nke a na ụdị nchọpụta usoro adabara ihicha ya ekweghị ọzọ cumbersome. N'ihi oge, anyị na-enweghị ike nwalee ihicha ya ekweghị otu otu. N'oge a, anyị mkpa mgbe na-enweghị usoro wepụ onye ihicha ihe n'ihi ule. The N'ihi bụ iji chọpụta na ịdị ọcha nke niile ihicha ihe. The mkpa ntị ka ojiji nke usoro a bụ iji họrọ a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke ule ọzọ n'ụzọ ziri ezi na-egosi na n'ozuzu ọnọdụ.
(2) Atụ na kasị nsọ akụkụ dị ka nnyocha ọkọlọtọ
Mgbe anyị na-eji usoro a maka ule, ma ọ bụrụ na ihe ndị kasị nsọ, akụkụ ruru achọrọ larịị nke ịdị ọcha, mgbe ahụ ihicha mmetụta nke n'akụkụ ndị ọzọ na-erughị oké mmetọ nwere ike n'ozuzu izute chọrọ nke ịdị ọcha.
(3) Special nnyocha kpọmkwem unyi
Nke a na usoro nke nchọpụta bụ iji họrọ kasị akpa unyi maka n'ihe. The n'ozuzu n'ibu akụkụ na-degreased na kpochara. Usoro a bụ adabara. N'oge a, na-elekwasị anya nke ule bụ mmanu mmanu unyi enweghị kpọmkwem nchọpụta nke ndị ọzọ unyi. Nke a ule usoro nwekwara ike ịlele ịdị ọcha nke ihe na-kpochara.
Site n'elu mmeghe, anyị pụrụ ịhụ na e nwere ọtụtụ ụzọ ịchọpụta ihicha mmetụta nke elu nsogbu Cleaner. Ị nwere ike ịhọrọ nchọpụta usoro ndị ọkà mmụta sayensị dị ka kpọmkwem ọnọdụ.
Car Ịsa Machine , High-Pressure mgbapụta , Anọ Point mgbapụta , Portable Car Ịsa Machine ,